Ọkachamara 10-1000kva Silent Type Dizel Generator Set Manufacturer and Factory Directly | Gị dị ka
10-1000kva Silent Ddị Dizel Generator Set
The uru nke anyị nkịtị ụdị generator setịpụrụ
1, The kọmpat ultra-obere size imewe ukwuu ebelata ohere nchekwa nke akụrụngwa na-eri nke njem na omenala nwechapụ. Otu 40HQ akpa nwere ike iburu 40 set 10-20kva generator sets.
2, gensets ịmụta n'elu mmanụ ụgbọala nke a na-kpaliri ọgwụgwọ ma n'ime ma n'èzí. Nhazi nke oke tank dị n'usoro iwu ike ndọda, anyị nwere ike hụ na ọkpọkọ mmanụ nwere mmanụ mgbe niile ma ọ bụrụhaala na mmanụ dị na tank. Ya mere, anyị nwere ike ịmalite gensets ozugbo n'oge ọ bụla na-enweghị iji aka wepu ikuku, aka dabara adaba maka nkeji ATS. The esịtidem galvanized imewe nwere ike igbochi tank mmanụ leakage onu, jide n'aka na ọ dịghị mmanụ ihihi.
3, The circuit nke njikwa usoro adopts imewe nke ike njikọ. Mgbe usoro nchịkwa na-ada, wepụ ihe nchịkwa mbụ ahụ, wee dochie ogwe njikwa ọhụrụ ma jikọọ njikọ njikọta. Ọ dịghị mkpa ịlele akara nke usoro njikwa otu n'otu tupu dochie plọg ahụ.
4, A na-anakwere mmepụta mgbapụ ikuku zoro ezo maka nrụpụta dị ike ugbu a; Mmepụta kpọmkwem nke ngbanwe ikuku nwere ike izere nsogbu ịgbado ọkụ site na nkwụsị nke ọdụ na eriri njikọ nke kpatara oke ugbu a. Zoro ezo ụdị ike ike igbe nwere ike izere omume nke leakage ihe mberede mgbe ejikọta USB, na-emechi na igbachi ụzọ, ka nweta mma ojiji nke ọkụ eletrik.
5, Mpụga AVR imewe kama mkpọpu ala n'ime unit imeghe n'azụ igbe nke alternator maka nnọchi, dị nnọọ emeghe ụzọ dochie AVR.
6, Ọ dị nnọọ mfe ịnọgide na-enwe akụkụ nke engine cylinder isi na tinye mmanụ site imewe nke n'elu mmezi window. Yabụ na ọ dịghị mkpa ka anyị banye na igwe jenerato setịpụrụ iji mezi injin ahụ, ma ọ bụ wepu kanopi niile.
Osote: 10-1000kva Open ụba Ddị dizel Power Generator Set
Nlereanya EP-13S EP-16S EP-20S EP-24S EP-30S EP-36S EP-50S EP-68S EP-80S EP-120S EP-200S EP-250S EP-300S
Ike ikike (KVA) 50Hz 16.25 20 25 30 37.5 45 Ogbe 62.5 85 100 150 250 312.5 375
Ike ikike (KVA) 60Hz Obochi 19.5 24 30 36 45 54 75 102 120 180 300 375 450
Ike kwụrụ (KVA) 50Hz 17.88 22 Ogbe 27.5 33 41.25 49.5 Ogbe 68.75 93.5 110 165 275 343.75 Ogbe 412
Ike kwụrụ (KVA) 60Hz 21.45 26.4 33 39.6 49.5 Ogbe 59.4 Ogbe 82.5 Ogbe 112.2 132 198 330 Ogbe 412 495
Ihe Nhọrọ Ike / COS
Nha 1750x750x800mm 2000X850X850 2240x850x980 2500x1000x1030 2850X1100X1200 2965x1100x1350 3400x1300x1580 3600x1300x1850
Ibu ibu 480kg 540kg 580kg 730kg 815kg 900kg 1040kg 1215kg 1480kg 1720kg 2280kg 2735kg 2865kg
Tank ikike 50L 50L 50L 50L 50L 70L 140L 140L 140L 140L 140L 140L 140L
Branddị Njin PERKINS, CUMMINS, KUBOTA, YUCHAI, FAWDE, YANGDONG, RICARDO wdg.
Atordị Alternator Stamford, Marathon, Meccatle, Leroy-somer, stanford ndị China, Ihe ndị yiri gị wdg.
Ogwe njikwa akara Oke osimiri, ComAp, Smargen wdg.
Oge Na-agba ọsọ (p / tank) 8 @ zuru ibu 6 @ ibu zuru 4 @ ibu zuru
Dị Nhazi AKWOUKWỌ AKW .KWỌ
Noise Ọkwa (@ 7m) 72
ISO9001 Gbaara EE
OA kwadoro EE
Generator Set mapụtara Parts Tụkwasịnụ